पृथ्वी घुमेर यसरी पुग्दैछ फेरि अस्ट्रेलियामा धुवाँ - Khabar Break | Khabar Break
पृथ्वी घुमेर यसरी पुग्दैछ फेरि अस्ट्रेलियामा धुवाँ
पुष २९ – अस्ट्रेलियामा ठूलो डढेलोको धुवाँ पृथ्वीमा एक फन्को घुमेर छिट्टै अस्ट्रेलिया नै पुग्ने नासाले बताएको छ। महिनौँदेखि अस्ट्रेलियाको पूर्वी तटीय क्षेत्रमा डढेलो लागेको छ र त्यसको धुवाँ प्रशान्त महासागरतर्फ बढेको जनाएको छ।
नासाका अनुसार नयाँ वर्षको पहिलो दिनको धुवाँ अहिले उत्तर अमेरिका पार भएको र जनावरी ८ सम्म पृथ्वी आधा घुमेको नासाको भनाइ छ। उक्त धुवाँले पृथ्वीको कम्तीमा एक फन्को लगाउने अपेक्षा गरिएको अमेरिकी अन्तरिक्ष संस्थाले बताएको छ। अस्ट्रेलियामा सयौँ स्थानमा डढेलो लागेको र त्यसले कम्तीमा २८ जनाको ज्यान लिनुको साथै २ हजार घर ध्वस्त बनाएको छ। विज्ञहरूले ती डढेलोहरूका कारण जलवायु परिवर्तन तीव्र बनाएको दाबी गरेका छन्।
धुँवा कसरी पृथ्वी घुम्छ ?
नासाका अनुसार ती डढेलोहरू यति विशाल छन् कि तिनले अस्वाभाविक रूपमा धेरै आगोका कारण हुने आँधीबेहरी ल्याएका छन्। त्यसको कारण धुवाँ आकाशको धेरै नै माथि पुगेको छ। धुवाँ १७।७ किलोमिटर माथिसम्म पुगेको नासाको तथ्याङ्क छ।
‘त्यति माथि पुगेको धुवाँ संसारभरको आकाशको अवस्थालाई प्रभावित पार्दै पृथ्वी घुम्न सक्छ,’ नासाले भनेको छ। नासाले त्यो उचाइको धुवाँले आकाशलाई चिस्याउने वा तताउने सम्बन्धमा अध्ययन गरिरहेको बताएको छ।
नासाका अनुसार धुवाँका कारण उत्तर अमेरिकाको आकाशको रङ्ग परिवर्तन भएको र न्यूजील्याण्डमा नाटकीय प्रभाव पारेको बताएको छ। न्यूजील्याण्डमा धुवाँले वायु प्रदुषण नराम्ररी बढाएको र हिमालको टुप्पोको हिउँलाई कालो बनाएको छ। अस्ट्रेलियाका ठूला शहरहरू सिड्नी, मेलबर्न, क्यानबेरा र एडिलेडको वायु प्रदूषण खतराको अवस्थामा पुर्‍याएको छ।
कस्तो चिया पिउनु हुन्छ ? यस्ता छन् चियाका १० फाइदाहरु
इतिहासकै धनी मान्छे, जो सुन बाँड्दै हिँड्थे